के Lyon मा हेर्न यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | फ्रान्स, मार्गदर्शकहरू
फ्रान्स योसँग धेरै राम्रा गन्तव्यहरू छन् र तपाइँ पेरिससँग एक्लै नहुनु पर्छ। उदाहरण को लागी, धेरै ईतिहासको साथ अर्को शहर हो लियोन। थप रूपमा, यो फ्रान्सको तेस्रो सबैभन्दा अधिक जनसंख्या भएको शहर हो र रोमन शासनको समयमा गलको राजधानी हुन्थ्यो।
लियोनसँग सबै चीज, ईतिहास, ल्यान्डस्केप, आर्किटेक्चर, युनिभर्सिटी वाइब्स र ग्यास्ट्रोनोमी छ जसले यसको आकर्षणमा धेरै स्वादका साथ थप गर्दछ। आउनुहोस् आज हेरौं के लियोनमा भ्रमण गर्ने ताकि यो शहर बिल्कुल अविस्मरणीय छ।
2 ल्योन पर्यटन
यो हो फ्रान्सको पूर्व, जहाँ साओन र रोन नदीहरू भेला हुन्छन्, पहाड र मैदान बीचमा। थियो by 43 ईसापूर्वमा रोमीहरूले स्थापना गरेको, पुरानो सेल्टिक सुदृढीकरणमा। दुई रोमी सम्राटहरू क्लौडियस र काराकाला यहाँ जन्मनु पर्ने थियो।
मध्य युगको अवधिमा इटालीको निकटताले यसलाई समृद्ध तुल्यायो, अझ विशेष गरी आधुनिक समयमा फ्लोरेन्टाइन बैंकर्स, जर्मनीसँगको वाणिज्यिक सम्बन्ध, धेरै प्रिन्टि pres प्रेसको अस्तित्व र मौलिक रूपमा रेशम व्यापार। रेशमको हातबाट स्पष्ट रूपमा यसले उन्नाइसौं शताब्दीमा नयाँ महिमा देख्नेछ।
दोस्रो युद्धको समयमा जर्मनहरूले कब्जा गरेका प्रतिरोध शक्तिहरूले पनि धेरै काम गरे। द्वन्द्वको अन्त्य भएपछि र फ्रान्सको पुन: प्राप्ति पछि, लियोनले बम विष्फोट गरिएको भवनहरूको पुनर्निर्माण र उदाहरणका लागि १ 70 .० को दशकमा मेट्रोको निर्माणसँगै आधुनिकीकरण गर्न थाले।
यो लामो इतिहासको साथ यो असम्भव छ कि शहरसँग ठुलो र चाखलाग्दो पर्यटन गन्तव्यहरू छैनन्। म भन्न चाहन्छु कि त्यहाँ सबै स्वादहरूको लागि केहि छ किनकि यसले प्राचीन युगलाई मध्य युग र आधुनिकसँग मिल्छ।
लियोन चार ऐतिहासिक छिमेक छ, कुल hect०० हेक्टर, जुन यूनेस्कोले घोषित गरेको छ विश्व सम्पदा। यसको पुरानो, रोमन र सेल्टिक भूतकाल पनि महसुस गर्नका लागि तपाईले शहरको सब भन्दा पुरानो पहाडमा जानु पर्छ, जुन त्यहाँ अझै पुरानो ठाउँहरू छन्। Lugdunum, ग्यालिक राजधानी।
यहाँ छ दुई रोमन थिएटरहरूको भग्नावशेष पुरानो, १ शताब्दी ई.पू. मध्ये एक, पहिलो शताब्दी AD मा विस्तार गरिएको, १० हजार व्यक्तिको क्षमताको साथ; र एक सानो छ, ओडियन, पहिलो शताब्दी AD देखि, सार्वजनिक पठन र पुनरागमनको लागि। यी सबै मा सिक्न सकिन्छ Lugdunum संग्रहालयछेउमा। तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ Notre-Dame de Fourvière Basilica र चर्च पहाड मुनि गुलाब बगैचा।
पछि साने नदी र फोरभियर पहाडको बीचमा हामी मध्यकालीन र रेनेसान्स भेट्टाउँछौं। यसले हामीलाई लियोन फेयरको सम्झना गराउँदछ, अविरल वाणिज्य आदानप्रदान जुन फ्ल्यामिस, जर्मन र इटालियन बैंकरहरू र व्यापारीहरू जो त्यहाँ बस्थे वा यहाँबाट आएका थिए। त्यसको बारेमा Vieux-Leyon वा पुरानो लियोन, यसको गल्लीहरू, यसको परिच्छेदहरू, आँगनहरू र पुराना भवनहरू सहित।
शहरको यस भागमा, त्यसोभए, तपाईंले गर्नु पर्छ सेन्ट जीन क्याथेड्रल भ्रमण गर्नुहोस्खगोलविद्घ घडीको साथ सेन्ट जर्जस गिर्जाघर, सेन्ट पल, चर्च आन्तरिक आंगन जुन टुरिस्ट अफिसमा लुकेका छन्, traboules सामान्य जनताका लागि खुला, त्यहाँ अरुहरू बन्द छन्, र केहि संग्रहालयहरू तपाईलाई चाखलाग्दो हुन सक्छ, जस्तै सिनेमा संग्रहालय र लघु वा लियोनको इतिहासको संग्रहालय।
शहरको अर्को डाँडामा, ला क्रोक्स - रुसे, रेशम र यसको व्यापार सम्बन्धित सबै कुरा अवस्थित छ। पहिले यहाँ thousand० हजार रेशम कामदारहरू थिए, तिनीहरूमा लगातार घुमाइने bistanclaquesयुरोपमा रेशमको रानीको रूपमा शहर इतिहासमा तल गयो। भवनहरूले तिनीहरूको गतिविधिहरूमा यो गतिविधिको लागि खाता बनाउँदछन् र ती मध्ये केही भ्रमण गर्न सकिन्छ। वास्तवमा के तपाईंलाई थाहा छ हर्मसले यहाँ लोकप्रिय रेशम स्कार्फ बनाउँदछ?
त्यसैले, यहाँ वरिपरि कार्यशालाहरूमा भ्रमण, आँगनहरु, Chartreux बगैचा नदीलाई हेरेर यहाँ र रोमन भग्नावशेषहरू, ट्रोइस-गउल्स एम्फीथिएटरको। अर्कोतर्फ छ प्रेस्कुले, लियोनको मुटु, वा कम्तिमा तपाईंको सबैभन्दा विलासी हृदय। यो छिमेकै बेलचेकुरबाट सुरु हुन्छ, विशाल पैदल यात्री वर्ग, र टाउन हल र म्यूजे डी बेलास आर्टिसमा समाप्त हुन्छ, प्लाआ डे टेरेक्समा। शहरको धन यस क्षेत्रको प्रत्येक भवनमा छ।
यहाँ छ लियोन ओपेरा, गोथिक शैलीको सेन्ट-निजियर चर्च, महँगो पसल, झरना, वर्ग र शहरको एक मात्र रोमन चर्च बसिलिका सेन्ट मार्टिन डे आइनेको सडक किनमेल गर्दै। यी सबैको सम्बन्धमा यहाँ एक हिड्न को लागी केहि एक जानु पर्छ, तर लियोनमा कुन गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ?
पोडेमोस लियोनको बोटानिकल गार्डेन, पार्कन डे हौटेर्स, राणेको ढलानको भ्रमण गर्नुहोस्, आफूलाई एक सानो लाडमा स्पा ल्योन प्लेज, ठूलो, एक segway वा एक इलेक्ट्रिक बाइक सवारीयो ल्योन बाइक टूरको लागि हो, कि टुक-टक वा क्लासिक फोक्सवैगन कोम्बीमा।
र जब रात हुन्छ र हामी बाहिर डिनर जान चाहन्छौं र केहि बढी हिंड्न चाहन्छौं, राम्रोसँग, तपाईंले जान्नु पर्छ यो सेनामा सामेल हुन लायक छ: ल्योनमा 300०० भन्दा बढी प्रतीकात्मक भवनहरू छन् जुन प्रज्ज्वलित छन् सबै वर्ष। थप रूपमा, त्यहाँ मौसममा निर्भर गर्दै सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, कन्सर्ट, चाडपर्व। उदाहरण को लागी, मे मा साउन्ड नाइट्स, इलेक्ट्रोनिक संगीत को, वा जुलाई मा फोरभियर नाइट्स छन्, गैलो रोमन थिएटर मा ...
र खानाको बारेमा, हामीले सुरुमा भनेझैं लियोनको ग्यास्ट्रोनोमी यसको अर्को आकर्षण हो। सन् १ 1935 .XNUMX पछि उनले यस पदवी सम्बन्धी उपाधि राखेका छन् Gast पेट्रोनामीको विश्व पूंजी capital त्यसैले त्यहाँ असंख्य रेस्टुरेन्टहरू छन्, यो अनुमान गरिन्छ कि चार हजार भन्दा बढी र सबै प्रकारका। त्यो हो, उच्च-श्रेणीका रेस्टुरेन्टहरूबाट फास्ट फूड वा अझ स्थिर जीवन। तिमि के खान्छौ? गाईको मासु, कुखुरा, चीज, ताल माछा, पहाड फल, खेल मासु र उत्कृष्ट र मान्यता प्राप्त गुणवत्ता को एक वाइन सूची।
अन्ततः, ल्योनमा कसरी पुग्ने? सजिलो: पेरिसबाट रेल वा बस छ। बार्सिलोना, लन्डन, मिलान, जिनेभा जस्ता अन्य यूरोपीय शहरहरूबाट उस्तै ... एक पटक शहर भित्र तपाईं बस, ट्याक्सी वा बाइक द्वारा सार्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं कार सार्न रोज्नुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै पार्किंगहरू छन्। र पक्कै पनि, त्यहाँ Rhônexpress ट्राम छ कि आधा घन्टा मा लियोन सेन्ट-एक्सप्युरी एयरपोर्ट लाईन पार्ट - डियु जोड्छ।
यदि तपाईं शहरमा टुरिस्ट कार्ड खरीद गर्नेहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ भने, तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ किनकि यहाँ एक छ: यो लियोन शहर कार्ड जसले शहरको २२ सबैभन्दा महत्वपूर्ण संग्रहालयहरूको ढोका खोल्छ, अन्य छुट र बस, मेट्रो, फनिक्युलर र ट्रामको निःशुल्क प्रयोग प्रदान गर्दछ। त्यहाँ १, २, and र days दिनको वैधता छ।
र के को बारेमा इन्टरनेट वाईफ़ाई? ठिक छ, यदि तपाईंसँग टुरिस्ट कार्ड छ, तपाईंसँग जडानमा 50०% छुट छ हिप्पकेटविफी जुन प्लेस बेलिकौरमा पर्यटन मंडपमा फेला पार्न सकिन्छ। जस्तो तपाई हेर्नुहोस्, ल्योन तपाईलाई खोज्न तपाईको प्रतीक्षा गर्दैछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » फ्रान्स » ल्योनमा के हेर्ने
मार्सिलेमा के हेर्ने
राष्ट्रिय पर्यटक चासोको चाडहरू